သမီးလေးဗစ်တိုးရီးယားအတွက်..အလှူငွေလက်ခံရန်ဖွင့်ထားတဲ့ AYA Bank အကောင့်ကို ဘဏ်က ပိတ်ထား – ရှအေလငျး
သမီးလေးဗစ်တိုးရီးယားအတွက်..အလှူငွေလက်ခံရန်ဖွင့်ထားတဲ့ AYA Bank အကောင့်ကို ဘဏ်က ပိတ်ထား
သမီးေ လး ဗစ်တိုးရီးယားအတွက် ကိုဝင်းကိုကိုသိန်းအကောင့်ဖြင့် ဖွင့်ထားသော AYA Bank အကောင့်မှာယခုမနက်တွင်ငွေအထုတ်သွင်းလုပ်မရဖြစ်နေတယ်လို့ အလှုငွေလက်ခံသူများထံမှသိရှိရပါတယ်။ ယမန်နေ့က သက္ကမိုးညိုအား အလှူခံသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီးမမှန်မကန်လုပ်ထားပါက စုံစမ်းအရေးယူမယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတာလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။ အလှုငွေလက်ခံပေးနေသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဂျက်စီကာမိုးဇက်ကတော့ ယခုလိုရေးတင်ထားကိုတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်
သမီးလေး Victoria အတွက် Fund Raising လုပ်နေတဲ့ ဘဏ်အကောင့်ကို ငွေလွှဲလို့မရဘူးလို့ လာပြောသူတွေရှိလို့ …ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင် AYA အကောင့်ကနေ ငွေလွှဲကြည့်ပါတယ်။ ငွေလွှဲမရပါ။ Finance Team မန်ဘာအနေနဲ့ Fund Raise လုပ်ထားတဲ့ AYA Bank – 0001201010128890 – Win Ko Ko Thein အကောင့်ကို Mobile Banking ကနေ ဝင်ကြည့်ပါတယ်။
အကောင့်ထဲမှာ ဘာမှမတွေ့ပါ။ ဘာမှမမြင်ရတော့ပါ။ မနေ့က ၁၀ ရက်နေ့ ည ၇:၅၆ မိနစ်အချိန်အထိမှာ သမီးလေး Victoria အတွက် Fund – Ks 18,413,380/- (တစ်ရာရှစ်ဆယ့်လေးသိန်း တစ်သောင်းနှင့် သုံးထောင့်သုံးရာရှစ်ဆယ်ကျပ်) လက်ခံရရှိထားပါတယ်။ မနေ့ညက Update လည်း တင်ပေးထားပါတယ်။ အလှူရှင်များနဲ့တကွ၊ ဝန်းရံသူ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံးကို အသိပေးအပ်ပါတယ်။ Jessica Mozart ဆိုပြီး သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာအသိပေးကြေငြာထားပါတယ်။
ဝေဖန်သူတစ်ချို့ကတော့ Bank ကို ရဲက သွားပီး Acc ပိတ်တာတို့ဆို ငွေလဲ ထုတ်မရ လွှဲလဲ လွှဲမရ အဲ့လိုကြီး ဖြစ်နေမှာပါ တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင် Bank acc ထဲက ငွေက အသေကြီးလိုဖြစ်သွားမှာပါ သူတို့ဘက်က ခွင့်ပြုချက်မရ မချင်း အဲ့ acc ထဲက ငွေ တစ်ပြားမှ သုံးမရတော့တာမျိုးပါ ဆိုပြီးကွန်းမန့်ပေးဝေဖန်ထားကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။
Credit – Cele Family
သမီးေ လး ဗဈတိုးရီးယားအတှကျ ကိုဝငျးကိုကိုသိနျးအကောငျ့ဖွငျ့ ဖှငျ့ထားသော AYA Bank အကောငျ့မှာယခုမနကျတှငျငှအေထုတျသှငျးလုပျမရဖွဈနတေယျလို့ အလှုငှလေကျခံသူမြားထံမှသိရှိရပါတယျ။ ယမနျနကေ့ သက်ကမိုးညိုအား အလှူခံသညျ့ကိစ်စနှငျ့ပတျသတျပွီးမမှနျမကနျလုပျထားပါက စုံစမျးအရေးယူမယျလို့ ရဲတပျဖှဲ့ကထုတျပွနျထားတာလညျးရှိနပွေနျပါတယျ။ အလှုငှလေကျခံပေးနသေူတဈဦးဖွဈတဲ့ ဂကျြစီကာမိုးဇကျကတော့ ယခုလိုရေးတငျထားကိုတှရေ့တာပဲဖွဈပါတယျ
သမီးလေး Victoria အတှကျ Fund Raising လုပျနတေဲ့ ဘဏျအကောငျ့ကို ငှလှေဲလို့မရဘူးလို့ လာပွောသူတှရှေိလို့ …ကြှနျမရဲ့ကိုယျပိုငျ AYA အကောငျ့ကနေ ငှလှေဲကွညျ့ပါတယျ။ ငှလှေဲမရပါ။ Finance Team မနျဘာအနနေဲ့ Fund Raise လုပျထားတဲ့ AYA Bank – 0001201010128890 – Win Ko Ko Thein အကောငျ့ကို Mobile Banking ကနေ ဝငျကွညျ့ပါတယျ။
အကောငျ့ထဲမှာ ဘာမှမတှပေ့ါ။ ဘာမှမမွငျရတော့ပါ။ မနကေ့ ၁၀ ရကျနေ့ ည ၇:၅၆ မိနဈအခြိနျအထိမှာ သမီးလေး Victoria အတှကျ Fund – Ks 18,413,380/- (တဈရာရှဈဆယျ့လေးသိနျး တဈသောငျးနှငျ့ သုံးထောငျ့သုံးရာရှဈဆယျကပျြ) လကျခံရရှိထားပါတယျ။ မနညေ့က Update လညျး တငျပေးထားပါတယျ။ အလှူရှငျမြားနဲ့တကှ၊ ဝနျးရံသူ ညီအဈကိုမောငျနှမမြားအားလုံးကို အသိပေးအပျပါတယျ။ Jessica Mozart ဆိုပွီး သူ့ရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာအသိပေးကွငွောထားပါတယျ။
ဝဖေနျသူတဈခြို့ကတော့ Bank ကို ရဲက သှားပီး Acc ပိတျတာတို့ဆို ငှလေဲ ထုတျမရ လှဲလဲ လှဲမရ အဲ့လိုကွီး ဖွဈနမှောပါ တနညျးအားဖွငျ့ပွောရရငျ Bank acc ထဲက ငှကေ အသကွေီးလိုဖွဈသှားမှာပါ သူတို့ဘကျက ခှငျ့ပွုခကျြမရ မခငျြး အဲ့ acc ထဲက ငှေ တဈပွားမှ သုံးမရတော့တာမြိုးပါ ဆိုပွီးကှနျးမနျ့ပေးဝဖေနျထားကွတာကိုလညျးတှရေ့ပါတယျ။
မြန်မာ့ ရိုးရာဝတ်စုံလေးတွေ နဲ့ ချစ် စရာကောင်းနေ တဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေးများ !!!!
ကျောင်းလခအဖြစ်​ ..ပလတ်စတစ်​​​အမှိုက်​​တွေကိုလက်​ခံပြီး ..စာသင်​​ပေးတဲ့ ​ကျောင်း
သူများတွေ သိကုန်ပြီ ကိုယ်သိဖို့ပဲ လိုတော့တယ်.. ကျော်မသွားလိုက်ပါနဲ့
အကယ်ဒမီရမှာ သေချာတယ်လို့ လူပြောများနေတဲ့ မအေးသောင်း ရဲ့ အကယ်ဒမီပွဲတက်ဖက်ရှင်
အကျပ်အတည်း အခက်အခဲကြုံနေသူတိုင်း… ယနေ့ လပြည့််ည သန်းခေါင်ကျော်မှာ...
Fan အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အချိန် မောင်ချိုနဲ့ဆက်ဆံရေး တစ်ခုကို...